ဘာမှမလိမျးခွယျထားတဲ့ သူမရဲ့ သဘာဝအလှ ပုံရိပျလေးတှကေို ခပြွလိုကျတဲ့ အေးမွတျသူ – Askstyle
ဘာမှမလိမျးခွယျထားတဲ့ သူမရဲ့ သဘာဝအလှ ပုံရိပျလေးတှကေို ခပြွလိုကျတဲ့ အေးမွတျသူ
ဘာမှမလိမ်းခြယ်ထားတဲ့ သူမရဲ့ သဘာဝအလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ
မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားပြီး သဘာဝအလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့အလှပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးမြတ်သူက မိတ်ကပ်တွေ မလိမ်းခြယ်ထားပဲ သူမရဲ့ သဘာဝအလှပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားပြီး ခုလိုပြောထားပါတယ်။
အေးမြတ်သူ က “မမြတ်လေး မှာ… ပုံလှလှလေးတွေ မရှိတော့ ..ရှိတဲ့ပုံလေးတွေ တင်လိုက်တယ်နော်… ပျော်ရွှင်ခြင်း အစစ်အမှန် က ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာဆိုတာ မေ့ပြီး…အပြင်မှာလိုက်ရှာနေလို့ သတိပေးနေရတယ်…ချစ်ရသူတို့လည်း …မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်အမှန် နဲ့ …. ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင် ” ဆိုပြီးသူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
အေးမြတ်သူ ရဲ့အလှ ပုံရိပ်ကလေး
ပရိသတ်ကြီးလည်း အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
မငျးသမီးခြောလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ အေးမွတျသူ ဟာဆိုရငျ သရုပျဆောငျမှုအပိုငျးမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပျဆောငျကှကျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဖြျောဖွတေငျဆငျပေးခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုမြားစှာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုမြားစှာကို ရရှိထားပွီး သဘာဝအလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အေးမွတျသူ ရဲ့အလှပုံရိပျကလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဒီတဈခါမှာတော့ အေးမွတျသူက မိတျကပျတှေ မလိမျးခွယျထားပဲ သူမရဲ့ သဘာဝအလှပုံလေးတှကေို ဖျောပွထားပွီး ခုလိုပွောထားပါတယျ။
အေးမွတျသူ က “မမွတျလေး မှာ… ပုံလှလှလေးတှေ မရှိတော့ ..ရှိတဲ့ပုံလေးတှေ တငျလိုကျတယျနျော… ပြျောရှငျခွငျး အစဈအမှနျ က ကိုယျ့နှလုံးသားထဲမှာဆိုတာ မပွေီ့း…အပွငျမှာလိုကျရှာနလေို့ သတိပေးနရေတယျ…ခဈြရသူတို့လညျး …မိမိပိုငျဆိုငျတဲ့ ပြျောရှငျခွငျးအစဈအမှနျ နဲ့ …. ပြျောရှငျကွပါစရှေငျ ” ဆိုပွီးသူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာ ရေးထားပါတယျ။
အေးမွတျသူ ရဲ့အလှ ပုံရိပျကလေး
ပရိသတျကွီးလညျး အေးမွတျသူ ရဲ့ ပုံရိပျကလေးတှကေို ပရိသတျတှေ သဘောကလြိမျ့မယျထငျပါတယျ။